Subtitles yihiin qoraalka helay hoose ee shay in transliterate hadal jilayaasha. Si loo caawiyo samaynta subtitles, waxaan heysanaa ogaato cadibo Cinwaan ugu fiican oo kaliya aad u.
Cinwaan Edit waa mid aad u hufan in la abuuro, la qabsado, howlan, iyo tarjumidda khadadka Cinwaan. Iyada oo barnaamijkan freeware aad dib isugu habayn karaan Cinwaan haddii aan la beehsa oo waxaad ka samaysaa subtitles cusub ka waqtiga ama waveform ama spectrogram. Masterpiece Tani waxay ku shaqayn karaa qaabab badan 170 Cinwaan wuxuuna ku qoran yahay ku dhawaad ​​30 luqadood.
Tani gaare Cinwaan waa mid ka mid ah taageerayaasha ugu wanaagsan ee SRT iyo SSA qaabab Cinwaan / dameer. Wakiil waveform Audio saldhig u ah barnaamijkan Cinwaan. Oo ayan ku jirin, waxay kuu ogolaaneysaa in aad si uu u hubiyo khaladaad, aad u hesho talooyin network, oo ay isticmaalaan tilmaamayaasha xawaaraha xaqiiqa hagaajin kartaa Fadilmo ee subtitles aad.
3. Cinwaan Workshop
Cinwaan-hawleedka, sida la moodayay kartaa magaca waa mid ka mid ah software ka qaadashada Cinwaan ugu fududayn in dareenka in aysan jirin qaab sida iyo feature in aanad ka heli doontaa waxa ku jira. Waxaad ka heli kartaa user saaxiibtinimo interface, akhriska iyo qorista engine, Iyada oo qalabka, muddo isa sudhsudhan, qamaar hawlgallada markii qalab, qoraalka & xiriira, Falanqeynta video (iyo wax kale oo laga yaabaa in aad rabto in aad) hal meel. Waa bixiyaha adeegga hal-stop.
Haddii aad ka fekereyso inaad la abuuro subtitles cusub ee DVD in aadan lahayn copyright ka, barnaamijkan waxaa laga heli karaa mid ka mid ah tifaftirayaasha Cinwaan awood leh in aad liiska. Tani gaare Cinwaan ayaa ka dhisay saaxir ah ee qoraalka DVD in sii dayn doonaa inaad ku dahaadhaa subtitles hadda ugu sareysa ee DVD-ka. Waxaad ku dari kartaa subtitles in kaliya hal go aan laga badinin asalnimada ee menu DVD ah. Intaa waxaa dheer waxaa qoreysa Falanqeynta DVD, wareeg / isbedel midab ah, .Wadashaqayntaas, editor WYSIWYG, tagging iwm
5. Aegisub Advanced Cinwaan Editor
Aegisub Advanced Cinwaan Editor waa gargaar weyn Abuuridda subtitles movie la isticmaalayo maqal ah ama video. Aegisub waa mid ka mid ah editor ugu Cinwaan technology-goynta ku laayeen oo u qabata in cross-madal. Tani qaab ciyaareed aad u sareeya taageertaa turjumaad ku dhowaad 30 luqadood oo kala duwan inta wakhtiga subtitles in ay audio iyo video la sameeyo degtaa & degdeg ah. Aegisub Advanced Cinwaan Editor leeyahay 3 noocyada kala duwan ee 3 nidaamyada hawlgalka kala duwan - Windows, OS X, iyo Unix.
DivXLand Media Subtitler waa mid ka mid ah ugu fiican in la abuuro, edit iyo hagaajin files Cinwaan dibadda ee dhammaan noocyada video. Waxaa haboon in la abuuro Cinwaan ka files far caadi ah. DivXLand Media Subtitler loogu tala galay inuu kaa caawiyo Falanqeynta deg dega ah, formatting qoraalka aasaasiga ah, hababka subtitling badan, joogay multi af-jeegga, degida & dhoofinta qaabab Cinwaan, tuuryo keyboard u shaqaynaya, waqtiga caption si toos ah iwm Barnaamijkan wuxuu taageeraa qaabab sida Adobe Encore, Sami , DKS, JACOSub 2.7, OVR Script, SubViewer 2.0, ZeroG, fab Subtitler iyo in ka badan.
WinSubMux soo dhaadacday oo karo subtitles in selectable subtitles SVCD ama CVD. Barnaamijkan waxaa lagu horumariyay badan oo ay ka mid yihiin qaababka User Interface Garaafka, multiplex oo dhan durdurrada ee hal talaabo, badbaadin file hoosaadka, SVCD scan file, markii wareegaayo, bitmap Cinwaan palette beddelid iwm Waxaa haboon images Cinwaan waaweyn.
8. Cinwaan Editor
Editor Cinwaan waxaa Cinwaan weyn samaynta software in edit karaa, kala, si wadajir ah & turjumi Cinwaan u GNU ama Linux ama * BSD nidaamyada iyo muuqan tirtireyso / ogalanaya, jiididda-iyo-dhibic, GStreamer, Falanqeynta ciyaaryahanka video dibadda, subtitles kala sooca iyo dad badan oo dheeraad ah. Tani GTK + 2 qalab la qaabab sida Adobe Encore DVD, STL gran, BITC, TTAF, Plain Text-iwm shaqayn karaan
9. AHD subtitles Kan sameeyey,
Kan sameeyey AHD subtitles waa xal dhameystiran arrimaha subtitling. Waa gaare Cinwaan ugu fiican haddii loo isticmaalo qaabab Cinwaan qoraalka ku salaysan in lagu kala qaadi karaa sida file hal. Isticmaalka qalab xirfadeed waxa aad si toos ah u abuuri karaan subtitles in sida ugu sax ah oo waxtar leh oo aan xitaa isticmaalka qabnay. AHD ayaa lagu daray barnaamijka loo yaqaan AHD ID3 Tag Editor in wax ka bedel iyo badbaadin versions Tag ID3 1 iyo 2 ..
Isticmaalka SubEdit Player waxaad ku dari kartaa kuwan raadkaygay Cinwaan si fudud aad u badan. Si toos ah Qoraalka subtitles ama xitaa iyaga soo degida ka mid ilo dibadda sida internet ama barnaamij kasta oo gaar ah ayaa sameeyey barnaamijkan gaare ah Cinwaan dhamaystiran. SubEdit Player taageertaa qaabab ay ka mid yihiin WMA, wmv, regelingen, DIVX, VOB, M1V, bartamaha, AC3. ASF iyo qaar badan.
> Resource > Video > Top 10 Cinwaan Kan sameeyey Software